Cristiano Ronaldo oo shaaca ka qaaday sababta uu daawashada ciyaaraha uga mamnuucay Hooyadiis – Gool FM
(Yurub) 18 Sebt 2019. Xidigga kooxda Juventus iyo Xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa waxaa wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay barnaamijka (Good Morning Britain) ee uu daadihiyo Piers Morgan kaasoo ka baxa ITV.
CR7 ayaa wareysigaan waxaa lagu weydiiyey waxyaabo badan oo noloshiisa gaarka ah quseeya, waxaana ka mid ahayd wax ka jira inuu hooyadiis ka mamnuucay daawashada ciyaaraha.
Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday in hooyadiis ay labo jeer suuxday mar ay daawaneysay kulammada waa weyn, sidaasi awgeed uu haatan ka mamnuucay inay ciyaaraha daawato.
Isagoo ka hadlay arrintaas CR7 ayaa yiri: “Waxay noqotaa mid walwalsan marka ay daawaneyso ciyaaraheyga, mana fahamsani sababta, haatan uma ogolaado inay daawato kulammada waa weyn.”
“Waxaan leeyahay saaxiibo iyada la jooga, waxaana ay ku dhex socotaa guriga, waxa ay labo jeer ku dhex suuxday garoonka, aad ayay u walwashaa.”
Ronaldo ayaana hadalkiisa ku soo xiray: “Aabbe la’aan ayaa ahay haatan ma doonayo inaan hooyo la’aan noqdo, sidaasi darteed waxaan u sheegay inaysan daawanin kulammada waa weyn sida afar dhammaadka (Semi-finalka) iyo kama dambeysyada (final-ka).